महामारीका बीच खुसी साट्न आयो दसैं — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > महामारीका बीच खुसी साट्न आयो दसैं
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच नेपालीको महान् पर्व बडादसैं आज (शनिबार)बाट सुरु भएको छ ।
संकटका बीच पनि नेपालीहरू दसैंको आगमनसँगै खुसी साट्ने योजनामा जुटेका छन् । सुरक्षाका विधि तथा मापदण्ड अपनाएर दसैं मनाउन सरकारले सम्पूर्ण नेपालीलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।
धर्मशास्त्रीले सुरक्षा विधि अपनाएर खुसी साट्दै चाडपर्व मनाउने तथा खुसी र उमंगसँगै मनोबल बढाउन सकिएमा कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहजता आउन सक्ने बताएका छन् ।
यसपालिको दसैंमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सक्ने आत्मबल पैदा होस् भन्ने कामनासहित पूजाआजा गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद् प्राडा. रामचन्द्र गौतमले बताए ।
बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरी चोखो भएर पूजाकोठामा बालुवा अथवा चोखो माटो राखी जौ र मकैको बिउ उमार्ने गरिन्छ ।
त्यही नजिकै थालीमाथि सुनको प्रतिमा राखी नवदुर्गा थाप्दै १० दिनसम्म पूजा गर्ने गरिन्छ । कहीँकहीँ मकै र गहुँको प्रयोग भए पनि अधिकांश स्थानमा जौ छर्ने प्रचलन छ ।
जौलाई वैदिक यज्ञका लागि अत्यावश्यक वस्तु मानिन्छ । माता भगवतीलाई मन पर्ने वनस्पतिमा जमरा पनि एक भएकाले भगवतीलाई खुसी पार्न जमरा उमार्ने गरिएको अध्यक्ष डा. गौतमले बताए ।
नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले यसपालि १० कात्तिकमा पर्ने विजयादशमीको टीका लगाउने उत्तम साइत बिहान १० बजेर १९ मिनेटमा रहेको जनाएको छ ।
मान्यजनको हातबाट देवीको प्रसाद ग्रहणका लागि शुभसाइत तोकिए पनि सर्वसाधारणका लागि विजयादशमीको दिनभर नै उत्तम भएकाले जुनसुकै बेला टीका प्रसाद ग्रहण गर्दा पनि शुभ हुने समितिका अध्यक्ष प्राडा. रामचन्द्र गौतमले बताए ।
छैटांै दिन कात्यायनीको पूजा गरिन्छ भने सातौं दिन कालरात्रि देवीको पूजा गरिन्छ । कालो वर्ण भएकी कालरात्रि देवीको वाहन गधा हो भने देवीले क्रोधमा आगो निकाल्छिन् ।
चार हात भएकी देवीको चारै हातमा तरवार, मसाल र वरमुद्रा लिएकी हुन्छिन् । फूलपातीका दिन पुजिने देवी यिनै हुन् । यसैगरी, अष्टमीका दिन देवी महागौरीको पूजा गरिन्छ । विजयादशमीको अघिल्लो दिन सिद्धिदात्री देवीको विशेष पूजा गर्ने चलन छ ।
२०७७ कार्तिक १ गते ०८:१७ मा प्रकाशित
कर्मचारीलाई ४० हजार रुपैयाँसम्म दशैं बोनस !
कर्जा खुकुलो गर्दै राष्ट्र बैंक : २ करोडसम्मको कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने
कामना सेवाद्वारा ब्याजमा भारी छुट
घरबाहिर पनि निस्कन नपाउने गरि थप एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय
राष्ट्र बैंकले गर्यो ३६ जना कर्मचारीको बढुवा (नामावलीसहित)